आफ्नै अपान वायु बेचेर लखपति बनिन् यी महिला - बडिमालिका खबर
आफ्नै अपान वायु बेचेर लखपति बनिन् यी महिला
संसारमा मानिसहरु अनेक खालका कामहरु गरेर पैसा कमाउँदछन् । तर के कोही मानिसले आफ्नो अपान वायु (पाद) बेचेर पनि पैसा कमाउन सक्दछ ? यो त हुनै नसक्ने कुरा हो भन्ने लाग्दछ । तर संसारमा नबिक्ने कुरा के पो रहेछ र ? अमेरिकामा एक महिलाले आफूले अपान वायु निस्कासन गरेको भिडियोहरु बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेकी छिन् ।